ဓာတ်ပုံများကိစ္စ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြောလာတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်… – Askstyle
ဓာတ်ပုံများကိစ္စ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြောလာတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်…
သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင် တစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ လက ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အတွင်းရေး ဓာတ်ပုံများကိစ္စကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြောလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်က မြတ်ကေသီအောင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ဓာတ်ပုံများ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ပေါက်ကြားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး သိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံများဟာ ဖန်တီးမှုမဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ပုံများဖြစ်ပြီး အနီးကပ် အဖော်တစ်ယောက်က ဖောက်ချခံရသည့်သဘောမျိုး ဒီနေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်) သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အ….ဖော်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကအပေါင်းအသင်း နည်းတော့ ကိုယ့်နားမှာရှိတဲ့သူတွေကို တွယ်တတ်တယ်. လက်ခိူးရေလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအပေါ်ကိုယ့်ညီမတွေ မောင်နှမတွေလို စိတ်ထားပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီပေးတတ်တယ်. ဘယ်သွားတယ် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမိူး ဘယ်သူနဲ့ ကြိုက်မိသွားတယ်ဆိုတာကအစ ကိုယ့်အဖော်ကို ဖွင့်ပြောပြတတ်တယ်”
.“ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုရင် အမြဲယုံကြည်ပြီး ကိုယ်ခံစားရသမျှကို တလုးံမကျန်တိုင်ပင်မိတ်တယ်. ကိုယ့်ဘဝမှာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ စည်းတခုလို စောင့်စည်းရမဲ့ အရာလို့နားလည်ထားခဲ့ပေမဲ့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ အဖော်တွေကတော့ ကိုယ့်စိတ်လို မဟုတ်တဲ့အခါ… အဖော် ဆိုသည်မှာ အ ရင် ဖော်ခံရမယ်လို့ပဲ နားလည်လိုက်ပါတော့တယ်” လို့ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဆိုရင် ဓာတ်ပုံများကိစ္စပေါက်ကြားပြီးနောက် သူမရဲ့ ပထမဆုံး ဖေ့စ်ဘွက်ပို့စ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ စိုးမြတ်သူဇာကလည်း “အမ်း သူများ တွေက နာ့ကို ထင်နေအုံး မယ် နံမည်လေး ထည့်ပြော လိုက် သယ်ရင်း” လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရသည်။
မြတ်ကေသီအောင်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ ဇာတ်ကားဖြင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ ဇာတ်ကားဖြင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု အကယ်ဒမီများ ရရှိခဲ့သည့် မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
Photos©Myat Kay Thi Aung
သရုပျဆောငျ မွတျကသေီအောငျတဈယောကျ ပွီးခဲ့တဲ့ လက ပေါကျကွားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အတှငျးရေး ဓာတျပုံမြားကိစ်စကို ပထမဆုံးအကွိမျ ထုတျပွောလာပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ ၂၂ ရကျက မွတျကသေီအောငျရဲ့ ကိုယျလုံးတီး ဓာတျပုံမြား ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာ ပေါကျကွားပွီး တဈနိုငျငံလုံး သိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံမြားဟာ ဖနျတီးမှုမဟုတျပဲ သူမရဲ့ပုံမြားဖွဈပွီး အနီးကပျ အဖျောတဈယောကျက ဖောကျခခြံရသညျ့သဘောမြိုး ဒီနေ့ (နိုဝငျဘာလ ၂၄ ရကျ) သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားလာတာ ဖွဈပါတယျ။
“အ….ဖျောဆိုသညျမှာ ကိုယျကအပေါငျးအသငျး နညျးတော့ ကိုယျ့နားမှာရှိတဲ့သူတှကေို တှယျတတျတယျ. လကျခိူးရလေို့ရတဲ့ သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေအေပျေါကိုယျ့ညီမတှေ မောငျနှမတှလေို စိတျထားပွီး စိတျရောကိုယျပါ ကူညီပေးတတျတယျ. ဘယျသှားတယျ ဘာလုပျတယျဆိုတာမိူး ဘယျသူနဲ့ ကွိုကျမိသှားတယျဆိုတာကအစ ကိုယျ့အဖျောကို ဖှငျ့ပွောပွတတျတယျ”
.“ကိုယျ့ခဈြတဲ့သူတှဆေိုရငျ အမွဲယုံကွညျပွီး ကိုယျခံစားရသမြှကို တလုးံမကနျြတိုငျပငျမိတျတယျ. ကိုယျ့ဘဝမှာလြှို့ဝှကျခကျြဆိုတာ စညျးတခုလို စောငျ့စညျးရမဲ့ အရာလို့နားလညျထားခဲ့ပမေဲ့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ အဖျောတှကေတော့ ကိုယျ့စိတျလို မဟုတျတဲ့အခါ… အဖျော ဆိုသညျမှာ အ ရငျ ဖျောခံရမယျလို့ပဲ နားလညျလိုကျပါတော့တယျ” လို့ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာဆိုရငျ ဓာတျပုံမြားကိစ်စပေါကျကွားပွီးနောကျ သူမရဲ့ ပထမဆုံး ဖစျေ့ဘှကျပို့ဈတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပို့ဈအောကျမှာ စိုးမွတျသူဇာကလညျး “အမျး သူမြား တှကေ နာ့ကို ထငျနအေုံး မယျ နံမညျလေး ထညျ့ပွော လိုကျ သယျရငျး” လို့ ရေးသားထားတာကို တှရေ့သညျ။
မွတျကသေီအောငျသညျ ၁၉၉၉ ခုနှဈက ရငျထဲကဆောငျးရာသီ ဇာတျကားဖွငျ့ အမြိုးသမီးဇာတျပို့ဆု၊ ၂၀၀၅ ခုနှဈက ခဈြခွငျးဖှဲ့မတ်ေတာ ဇာတျကားဖွငျ့ အမြိုးသမီးဇာတျပို့ဆု အကယျဒမီမြား ရရှိခဲ့သညျ့ မငျးသမီးတဈဦးဖွဈသညျ။